Danjire Kay oo ka walaacsan in muranka ka jira Soomaaliya uu dib u dhigo Higsiga 2016 – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
5th February 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Ergayga gaarka ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Kay iyo danjiraha Midowga Afrika iyo AMISOM ee Somalia, Maman S. Sidikou oo uga qaybgalay khadka taleefoonnada shir xubnaha golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay uga hadlayeenn xaaladda ka taagan Somalia ayaa walaac xooggan ka muujiyay xaaladda Soomaaliya.
Mr Kay ayaa sheegay inuu xaaladda Soomaaliya ka qabo walaac iyo rajo isku dhafan, isagoo xusay in howlaha laga doonayo Soomaaliya ay dib u dhac ku keeneen murannadii siyaasadeed ee soo dhexgalay madaxda Soomaaliya.
“Markaan eego sannadkan 2015-ka waan ku faraxsanahay, dhinaca kalena walwal ayaan qabaa, waayo waa mid laga gaari karo go’aan in Somalia hormar weyn ay ku tallaabsato, howlaha harsanna la dhameystiro, balse weli caqabado ayaa jira,” ayuu yiri danjire Kay.
Sidoo kale, ergyga oo ka hadlayay rajadiisa ku aaddan in howlaha dowladda Soomaaliya u harsan la dhameystiri karo ka hor xilliga loo qabtay inay dalka ka dhacdo doorasho, ayaa sheegay in taas uu rajo ka qabo, laakiinse ay ku xiran hadba sida caqabada jira looga gudbo.
“Waxaan qabaa in sanadka cusub uu noqdo mid la hirgelin karo hannaanka federaaliisimka Soomaaliya, hirgelinta arrintana waxaa caqabad ku noqday muskiladihii siyaasadeed ee la soo maray. Waxaanu doonaynaa inaan ka dhabeyno ballanqaadii aan sameynnay sannadkii hore ee 2014-ka, inta lagu jiro sanadkanna la dhameystiro dhismaha maamullada gobollada Somalia,” ayuu mar kale yiri danjiraha Qaramada Midoobay ee Somalia.
Dhanka kale Ergayga gaarka ah ee Midowga Africa u qaabilsan Soomaaliya ayaa isagana ka hadlay kulanka xubnaha Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay eek u yeesheen magaalada New York.
Wuxuu Sheegay danjire, Maman S. Sidikou,Ciidamada Dowlada oo kaashanaya kuwa AMISOM sanadkii tagay ay qaadeen labo howlgal kuwaasi uu tilmaamay in shabaab looga qabsaday 16-magaalo.
Beesha caalamka ayaa horay walaac uga muujisay xaalada siyaasada Soomaaliya sida ay hada ku socoto kuna baaqday in dhinacyada ishaya ka yimaadaan dhibaatada si Shacabka Soomaaliyeed loo iftiimiyo mugdiga kaga jira sanadka soo socda 2016-ka oo rajadu tahay in dalka dooraso xor iyo xalaal ah ka dhacdo.
Wasiirka magacaaban ee difaaca Soomaaliya, Jen. Diini oo ka degay Muqdisho